BY D’R Saphaloo Kadiir’iin) Obboleessi kiyya kan xalayaa isaaf barreeffamte tana osoo hin dubbisin jalaa miliiyxe jiraa laata? Maaliif hin dubbisini ja’ee sin komadhu, ammuma dhaqqabadhu – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
BY D’R Saphaloo Kadiir’iin) Obboleessi kiyya kan xalayaa isaaf barreeffamte tana osoo hin dubbisin jalaa miliiyxe jiraa laata? Maaliif hin dubbisini ja’ee sin komadhu, ammuma dhaqqabadhu
OBBOLEESSA KIYYA: HOJJATAA MOOTUMMAA WAYYAANEE TAHE MARAAF.
Yaa obboleessa kiyya! Dhaamsiin xumura irratti siif qabu yoo jiraate barana haalli obboleeyyan keenya jalqaban kun adeemsa sirriiti. Sochiin bilisa of baasuuf, qabsoon gumaa abbaaf obboleeyyaan keenyaaf kafaluuf, harmees miidhaafi roorroo abbaa bideenaa jalaa eewaluuf, anaas dikee ambaarraa na galchuuf, siis mana abbaa keenyaatti alagaaf gabra tahuu kana jalaa si baasuuf warraaqsi obboleeyyan keenya barana jalqaban kun tarkaanfii dhugaati. Obboleeyyan keenya nu boodaan dhufan kun onnee abbaa keenyaa san qabaachuu waan hubatte natti fakkaata. Akkaan ani sodaadhee biyyarraa dheeysu, atiis manuma abbaa keenyaatti wandaqa akka taatu kan nu dirqe onnee akka abbaa keenyaa finiintuu diinaaf hin sagadne dhabuu keenya akka tahe ni beekta. Obboleeyyan keenya mirga isaaniif falmatan, kan haqa abbaa keenyaa deebisuuf xurree isaa qabatanii ka’an kana ukkaamsuuf, warraaqsa isaanii qancarsuuf si kan gurshaa xiqqoon soban kana fayyadamaa jiraachuu of beekta jedheen tilmaama. Osumaan ani taa’uu, osoo atiis ulee alagaan sitti kenniteen kaan aaggachaa kaaniis dhooytuu sadarkaa tanaan gahan qabsoo. Baayyeen isaanii dhiigaan seenaa gaarii nuuf galmeessanii dabraniis kanneen lubbuun hafan ammallee falmaa itti cimsaa jiran. Aniis xalayaa kana akkaan siif barreessu kan na taasisees kanuma. Eegaa yaa ilma aayyaa! Alagaan arra harmee teenya Oromiyaa dhaale, abbaan biddeenaa kun ati hojjataadha jedhee si ramadee kafaltii aanan xuuxxoo daa’imaa hin binne kanaan sobee wal irratti nu duulchisaa jira. Dhugaa dubbachuuf ati gadaameessaa Oromiyaafi gudeeda Oromoo keessaa baatee yoo obboleeyyan, haadhaaf abbaa keenya afaan deebitu, yoo qaama kee irraa ibidda shiddu, yoo harmee Oromiyaa alagaa saamsiftu muka kibriitii fakkaatta. Kibriitiin haadhaaf abbaa keessaa bahe dhiitee alagaaf ibidda qabsiisa. Mukni kibriitii cinaachuma haadha keessaa bahe irraa ibidda qabsiisuus inniis gubachuun isaa hin hafu. Ibiddi inni qabsiisu alagaaf malee isaaf humaa hin fayyadu. Kana atiis ni beekta. Kanaaf yaa obboleessa kiyya kan maqaa hojjataatiin alagaaf fe’amaa jirtu takka dhaabbadhuu of ilaali mee. Naaf gahe gabrummaan jedhii falmadhu. “Alagaa ilkee koflaa, fira gaafa goflaa!” Jedha turee mitii abbaan keenya. Wa’ada gadaameessaa tokko keessa nu boraafachiise san yaadadhu mee. Qorii obbolummaa tan harmeen teenya waliin nu soorte san qaxaph jedhi mee. Anumaaf siitu waliif fooni. Nuti obboleeyyan keenya waliin malee alagaa waliin hin miidhagnu, humaatiis bu’aa hin qabnu. Qilee abbaan biddeenaa jidduu keenyatti qote kana duuchinee, dallayya shiraaf alagaan nu jiddutti ijaare kana jiigsinee walitti haa baanuu mee. Atiis gama keetiin diigi aniis gama kiyyaan niin diigaa. Ulee alagaan sitti kenne darbi, aniis sodaa biyyaa na baafte darbeen nu lachuu obboleeyyan keenya waliin taanee falmaa cimsinaa. Ati gama keessaatiin ciri, aniis gama alaatiin ciraan girdoo walakkaa keenyatti alagaan hidhe tana marree handhura harmee teenyaa Finfinnetti walitti dhufna. Gargar faffacaanee humna dhabne malee galata isaatii rabbiin baayy’ina nutti hin qusane. Baayy’ina keenya kana irratti waliif galtee qabaannaan nuti galaana gufuuf kulluuda fedhe gangalchu tahuu keenya yaadadhu. Daqiiqaa tokkoof ija guduunfadhuu shira alagaan nuttiin jiru kana sammutti yaadi mee. Kan arra alagaan qabeenyuma abbaa keetii kan ati walitti qabdee geessituuf irraa xiqqo harkarratti sii qicu kanaaf jettee roga alagaa dhaabbachuun kee boruuf sheenaa madaa qubaa akka sitti hin taane adaraa. Xalayaan kiyya kun akkuma si geesseen dubbiftee murtii boonsaa akka fudhattu, alaagaan siif riqicha tahuun naaf gaha akka jettuun abdiin sirraa qaba. Yaa obboleessa kiyya! Silattuu kan karaa yoo tahe malee kan garaa waa hin xumuramtuu, hundaafuu sitti dheereessuu koof dhiifama jechaa arraaf asumattiin goolaba. Xalayaa biraatiin hanga walitti deebinuu ykn qaamaan wal agarruu nagayatti naaf turi. Dhaamsa kiyya kana akkuma xalayaan tun si geesseen naaf barreessi. Gadaan gadaa bilisummaa nuuf haa tahu.
Obboleessa kee: Ilma Gudee irraa.
Obboleessa kiyya: Ilma Aayyaa tiif
Saphaloo Kadiir / Abdulbasit Kedir